အခကျအခဲတှကွေုံနရေငျ ဒီဂါထာတျောလေးကိုပုံမှနျရှတျကွညျ့ပါ – မြန်မာသတင်းစုံ
တဈနေ့ (၇) ခေါကျ ပုံမှနျရှတျရုံနဲ့ ထူးခွားပါလိမျမယျ။ သိကွားမငျး ဂါထာတျော
ဝဒေါသာကု ၊ ကုသာဒါဝေ၊ ဒါယသာတ ၊ တသာယဒါ ၊ သာသာဓိကု ၊ ကုဓိသာသာ …. ကုတကုဘု ၊ ဘုကုတကု
တသာ=ငါပွုမိသော အကုသိုလျ ၁၀ပါးတို့သညျ …. ယ = ငါပွုမိသော ကုသိုလျ ၁၀ ပါး၏ တနျခိုးတျောတို့ကွောငျ့ ဒါ =ပွပြေောကျစကေုနျသတညျး။
သာ = စကျဆုပျဖှယျသောသူတို့အားလညျးကောငျး … သာ = အမကျြမာန ဒေါသရှိသော သူတို့အားလညျးကောငျး …. ဓိ = ဆုံးမသွဝါဒ ပေးခွငျးဖွငျ့သာလြှငျ
ကု = အောငျမွငျစသေတညျး။ ကု = ထိုထိုသော အမကျြမာန မာနျတကျသူတို့နှငျ့ ….ဓိ = ရှညျမွငျ့စှာ …. သာ =မပေါငျးဖျောရသညျ …. သာ = ဖွဈပါ
စသေတညျး။ ကု = ကုသိုလျစရိုကျ ပွုကငျြ့လရှေိ့သော …. တ = သူတျောကောငျးတို့နှငျ့သာလြှငျ ….ကု = ဖွဈလရော သံသရာ ဘဝအဆကျဆကျ၌ ….
ဘု = တှဆေုံ့ပေါငျးဖျောခွငျးကိုပွုရစသေတညျး။ ဘု = အကုသိုလျ ဒုစရိုကျ ပှါးမြားသူတို့နှငျ့ …. ကု = ဖွဈလရော သံသရာဘဝအဆကျဆကျ၌ ….
တ = အခါ ခပျသိမျး ….ကု = တှဆေုံ့ပေါငျးဖျောခွငျး မပွုရသညျဖွဈပါစသေတညျး။
တစ်နေ့ (၇) ခေါက် ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ ထူးခြားပါလိမ်မယ်။ သိကြားမင်း ဂါထာတော်
ဝေဒါသာကု ၊ ကုသာဒါဝေ၊ ဒါယသာတ ၊ တသာယဒါ ၊ သာသာဓိကု ၊ ကုဓိသာသာ …. ကုတကုဘု ၊ ဘုကုတကု
ဝေ = ငါ၏ရန်သူ ဟူသမျှတို့သည် …. ဒါ = ဝေးစွာသော အရပ်သို့ …. သာ = လျင်စွာ …. ကု = ပြေးကုန်သတည်း။
ကု = ငါ့အား မကောင်းသဖြင့် ကြံကုန်သောသူတို့သည် …. သာ = မိမိအလိုလို …. ဒါ = အကြံအစည် ပျက်သောအားဖြင့် …. ဝေ = ပျောက်စေကုန်သတည်း။ ဒါ = ငါ၏ ဒါန စေတနာတို့ကြောင့် …. ယသာ=အခြံအရံ အကျော်အမော်တို့သည် …. တ = ပွါးများ စေကုန်သတည်း။
တသာ=ငါပြုမိသော အကုသိုလ် ၁၀ပါးတို့သည် …. ယ = ငါပြုမိသော ကုသိုလ် ၁၀ ပါး၏ တန်ခိုးတော်တို့ကြောင့် ဒါ =ပြေပျောက်စေကုန်သတည်း။ သာ = စက်ဆုပ်ဖွယ်သောသူတို့အားလည်းကောင်း … သာ = အမျက်မာန ဒေါသရှိသော သူတို့အားလည်းကောင်း …. ဓိ = ဆုံးမသြဝါဒ ပေးခြင်းဖြင့်သာလျှင်
ကု = အောင်မြင်စေသတည်း။ ကု = ထိုထိုသော အမျက်မာန မာန်တက်သူတို့နှင့် ….ဓိ = ရှည်မြင့်စွာ …. သာ =မပေါင်းဖော်ရသည် …. သာ = ဖြစ်ပါ စေသတည်း။ ကု = ကုသိုလ်စရိုက် ပြုကျင့်လေ့ရှိသော …. တ = သူတော်ကောင်းတို့နှင့်သာလျှင် ….ကု = ဖြစ်လေရာ သံသရာ ဘဝအဆက်ဆက်၌ ….
ဘု = တွေ့ဆုံပေါင်းဖော်ခြင်းကိုပြုရစေသတည်း။ ဘု = အကုသိုလ် ဒုစရိုက် ပွါးများသူတို့နှင့် …. ကု = ဖြစ်လေရာ သံသရာဘဝအဆက်ဆက်၌ …. တ = အခါ ခပ်သိမ်း ….ကု = တွေ့ဆုံပေါင်းဖော်ခြင်း မပြုရသည်ဖြစ်ပါစေသတည်း။
Previous Previous post: အတန်းပိုင်ဆရာရဲ့ အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်ခံနေရလို့ ကိုယ့်ကိုအဆုံးစီရင်ခဲ့တဲ့ 16 နှစ်အရွယ် ကျောင်းသားလေး
Next Next post: ဗိုလျခြုပျပိုကျဆံ တဈထောငျတနျနဲ့ ဈေးဝယျလို့မရတဲ့အကွောငျး ပွောပွလာတဲ့ လူတဈဦး